सावधान ! धेरै टिभी हेर्दा मृत्युसमेत हुन सक्छ | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
सावधान ! धेरै टिभी हेर्दा मृत्युसमेत हुन सक्छ
काठमाडौँ – तपाईंमा टेलिभिजन (टिभी) हेर्ने सोख त छैन ? यदि त्यस्तो छ भने अब सावधान हुनुहोस् । हालै भएको एउटा अनुसन्धानअनुसार दैनिक चार घन्टाभन्दा बढी समय टिभी हेर्नु स्वास्थ्यका लागि घातक हुने देखिएको छ ।
बेलायतको ग्यास्गो विश्वविद्यालयले तीन लाखभन्दा बढी मानिसमा गरेको अध्ययनअनुसार यस्तो नतिजा आएको हो । अनुसन्धानकर्ताहरूले टिभी हेर्ने आदत भएका मानिसको दुई समूह बनाएका थिए । पहिलो समूहमा चार घन्टाभन्दा बढी हेर्ने थिए भने दोस्रोमा त्योभन्दा कम । जसअनुसार कम टिभी हेर्नेहरू स्वस्थ जीवन जिउनेको सूचीमा परे । यी मानिसको टिभी हेर्ने समय दुई घन्टा दुई मिनेटको थियो । योभन्दा अलि बढी टिभी हेर्नेहरूको स्वास्थ्य अवस्था केही खराब भेटियो ।
वैज्ञानिकहरूले दैनिक चार घन्टाभन्दा बढी टिभी हेर्ने मानिसको पनि परीक्षण गरे । लामो समयसम्म टिभीको सामुन्ने बस्नेहरूको मानसिक स्वास्थ्य खराब पाइयो । उनीहरूमा धूम्रपान, मद्यपान तथा गलत खानपानको लत पाइयो । यस्ता लत भएका मानिसमा हृदयरोगको खतरा देखियो । यसका साथै उनीहरूमा मोटोपन, चिडचिडाहट आदिको समस्या भएको थियो ।
शोधकर्ताहरूले लगातार अढाई घन्टा वा योभन्दा पनि बढी समय टिभी हेरेमा पल्मोनरी एम्बोलिस्मको खतरा हुने तथ्य पत्ता लगाएका छन् । यो अवस्थामा मानिसको खुट्टाको नसामा ब्लड क्लट (रगतको थक्का) हुन्छ । यस्तो हुँदा कलेजोमा हुने रगत प्रवाहको गति रोकिन सक्छ । रोकिएमा मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्छ ।
पुडासैनीले झुण्डिएर आत्माहत्या गरेको पुष्टी,पोष्ट मार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक
पूर्वराजा र विप्लवलाई गाली : पञ्चायतकालीन ‘अराष्ट्रिय तत्व’ जस्तै
विद्यालयमा एक लाखको अक्षयकोष
रवि लामिछानेलाई फेरि ५ दिन म्याद थपियो
सधैँ गोजीमा सुकुमेल बोकेर हिँड्नुस् ! सुन्दा अचम्म तर गजबको छ फाइदा
श्रोत नखुलेको भारतीय रुपैयाँ सहित ५ जना पक्राउ
प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यको अवकाश, प्राधिकरणले गर्यो विदाई
निकिता पौडेलले दिइन तिन जना विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी